တောင်ပေါ်ကကင်ညာအချက်အလက် - အာဖရိကရဲ့ဒုတိယအချက်အမြင့်ဆုံးတောင်
မြင့်: 17.057 ပေ (5,199 မီတာ)
ထင်ပေါ်ကျော်ကြား: 12.549 ပေ (3,825 မီတာ)
တည်နေရာ: ကင်ညာ, အာဖရိက။
ကိုသြဒိနိတ်: 0,1512 ° S / 37,30710 ° E ကို
ပထမဦးစွာအထိပ်: ဆာ Halford ယောဟနျသ Mackinder, Josef Brocherel နှင့် Cesar Ollier စက်တင်ဘာလ 13, 1899 ပေါ်မှာ။
တောင်ပေါ်ကကင်ညာ: အာဖရိကမှာ 2nd အမြင့်ဆုံး
တောင်ပေါ်ကကင်ညာအာဖရိကအတွက်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ကြီးတောင်ငယ်ကင်ညာနိုင်ငံအမြင့်ဆုံးသောတောင်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကကင်ညာ, 12.549 ပေ (3,825 မီတာတစ်ဦးမြင့်မြင့်တက်နှင့်တကွ, ကမ်ဘာပျေါတှငျ 32nd အထင်ရှားဆုံးသောတောင်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအပေါ်လည်းဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယအခုနစ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး , စာရင်းများခုနစ်လုံးကိုတိုက်ကြီးတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်များ။
တောင်ပေါ်ကကင်ညာရဲ့3ထိပ်သီးအစည်းအဝေး
တောင်ပေါ်ကကင်ညာင်း၏သုံးအမြင့်ဆုံးထိပ်-17,057 ပေ (5,199 မီတာ) Batian, 17,021 ပေ (5,188 မီတာ) Nelion နှင့် 16,355 ပေ (4,985 မီတာ) ပွိုင့် Lenana အပါအဝင်အများအပြားထိပ်သီးအစည်းအဝေး, ထားပါတယ်။
တောင်ပေါ်မှာကင်ညာနိုင်ရိုဘီ, ကင်ညာ၏မြို့တော်၏ 90 မိုင် (150 ကီလိုမီတာ) အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ တောင်တော်တောင်ဘက်အီကွေတာ၏ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကကင်ညာ3သန်းကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထကြတဲ့ stratovolcano ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုသန်း 2.6 အကြားနှင့်3လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမီးတောင်သည်၎င်း၏လက်ရှိအမြင့်မှဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်ခံရမီအဖြစ်မြင့်မားတဲ့ 19.700 ပေ (6000 မီတာ) အဖြစ်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်တော်ရဲ့အများစုဟာ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု ဂြိုဟ်တု Crater နှင့်ပလပ်အနီးအနားဒေသများရှိတက်ကြွမီးတောင်ညွှန်ပြပေမယ့်၎င်း၏ဗဟို plug ကိုကနေဖြစ်ခဲ့သည်။
နှစ်ဦးကိုတိုးချဲ့ glacial ကာလတောင်ပေါ်မှာကင်ညာထုဆစ်။
Moraines ဟာရေခဲမြစ်ရောက်ရှိနိမ့်ဆုံးမြင့် 10.800 ပေ (3,300 မီတာ) ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ်ခုလုံးကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်းအထူရေခဲထုပ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ 11 အသေးပေမယ့်ကျုံ့လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ် ရေခဲမြစ် တောင်ပေါ်မှာကင်ညာပေါ်မှာ။ Little ကဆီးနှင်းယခုတောင်တော်ပေါ်မှရေခဲမြစ်အပေါ်ဒီတော့အဘယ်သူမျှမသစ်ကိုရေခဲပုံစံများကိုကျရောက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုလေ့လာမှုများလက်ရှိအပူချိန်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှုအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လျှင်ရေခဲမြစ် 2050 ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်း။
အဆိုပါ Lewis က Glacier တောင်ပေါ်မှာကင်ညာအပေါ်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကကင်ညာအနေနဲ့အီကွေတာတောငျပျေါမှာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကနေ့ညဉ့်မပြတ်တစ်ခုချင်းစီကို 12 နာရီကြာမြင့်စွာရှိပါသည်။ နေထွက်များသောအားဖြင့်နံနက်ယံ၌အကြောင်းကို 5:30 သည်နှင့်နေဝင်ချိန်ညဦးယံ၌အကြောင်းကို 5:30 ဖြစ်ပါသည်။ အတိုဆုံးနေ့နှင့်အရှည်ဆုံးနေ့ကအကြားတစ်ခုသာတစ်မိနစ်ကွာခြားချက်ရှိပါသည်။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကင်ညာ၏မူလအစနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုလိုအားလုံးပေးသော၏စကား Kikuyu တွင် Kininyaga, Embu အဘိဓါန်အတွက် Kirenyaa နှင့် Kamba အဘိဓါန်အတွက် Kiinyaa မှရယူထားခြင်းမှသို့သော်အတွေးက "ဘုရားရဲ့ငြိမ်ဝပ်ရာအရပ်ကို။ " တောင်ပေါ်မှာကင်ညာရဲ့သုံးခုကိုအဓိကထိပ်-Batian, Nelion နှင့် Lenana- များ၏အမည်များ ဆိုင်းအကြီးအကဲများအားချီးမြှောက်။
Batian တောင်ကင်ညာရဲ့အမြင့်ဆုံးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၏ပထမဦးဆုံးတက်ဆာ Halford ယောဟနျသ Mackinder, Josef Brocherel နှင့် Cesar Ollier အားဖြင့်စက်တင်ဘာလ 13, 1899 ရက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုံး Nelion ၏အရှေ့တောင်ဘက်မျက်နှာတက်နှင့် bivouacked ။ နက်ဖြန်နေ့၌သူတို့ကဒါဝင် Glacier ကူးနှင့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှတက်ပြီးရှေ့တော်၌ထိုစိန် Glacier တက်။ Mackinder တောင်တော်ခြောက်လဥရောပတိုက်သား, 66 ဆွာဟီလီ, 96 Kikuyu အဘိဓါန်, နှစ်ယောက်ဆိုင်းနှင့်အတူကြီးမားတဲ့လေ့လာရေးခရီးဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပါတီအောင်မြင်မှုမတိုင်မီအစောပိုင်းစက်တင်ဘာလအတွက်သုံးမအောင်မြင်ကြိုးစားမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
တောင်တော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အာဖရိက-အယ်လ်ပိုင်းသစ်ပင်ပန်းမန်သို့မဟုတ်စက်ရုံဘဝအယ်လ်ပိုင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ဂေဟဗေဒတစ်ခုထူးချွန်ဥပမာစဉ်းစားသည်။ တောင်ပေါ်ကကင်ညာလည်းဒေါက်တာ Suess-စိတ်ကူးယဉ်ကုမ္ပဏီကြီး groundsel နှင့် lobelia ၏သစ်တောများအဖြစ်ဧရာမ Heather နှင့်သိပ်သည်းဝါးသစ်တောများနှင့်အတူ blanketed မြေရိုင်းလွင်ပြင်ရှိပါတယ်။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တို့ပါဝင်သည် မြင်းကျား , ဆင်, ကြံ့, ဘမ်းမိသောစိုင်, hydraxes, မျောက်နှင့်ခြင်္သေ့။
တောင်ပေါ်ကကင်ညာထက်ကိုတက်နိုင်ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲသည် Kilimanjaro , အာဖရိကရဲ့အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်။ Kili သာရဲရငျ့စှာပွောခြေထောက်နှင့်အဆုတ်လိုအပ်ပါတယ်သော်လည်း Batian နှင့် Nelion ၏အမွှာထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ရောက်ရှိစေရန်, ကျောက်တောင်တက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သည်။ အနည်းငယ်တောင်တက်သမားနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတောင်ပေါ်မှာကင်ညာ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရောက်ရှိဖို့။ ထက်ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်ခြင်းအပြင် Kilimanjaro မပေါ်တာမဟုတ်သလိုလမ်းညွှန်များလိုအပ်နေကြသည်ကတည်းကတောင်ပေါ်မှာကင်ညာတစ်ခုတက်စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကကင်ညာအပေါ်တက်ပြီးအဆိုပါအီကွေတာရာသီနှင့်နေရောင်၏အနေအထားအပေါ်မူတည်ပါသည်။ နေရောင်ကိုဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလမှမြောက်ဘက်တွင်ရှိနေစဉ်ကင်ညာရဲ့တောင်ပိုင်းမျက်နှာများပေါ်တွင်ရေခဲတောင်တက်အကောင်းဆုံးတက်နေကြသည်။ ဒါဟာရာသီမှာလည်းမြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့မကျြနှာမြားပျေါတှငျအကောင်းဆုံးရော့ခ်တောင်တက်အခြေအနေများပေးထားပါတယ်။ နေရောင်ကိုဒီဇင်ဘာလကနေမတ်လမှတောင်ဘက်၌တည်ရှိ၏တဲ့အခါမှာမြောက်ဘက်မျက်နှာများရေခဲတောင်တက်အခြေအနေများပူဇော်စဉ်အခါ, တောင်ပိုင်းမျက်နှာများကျောက်တောင်တက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန်တောင်တက်လမ်းကြောင်းဖွင့် Batian 20-စေးမြောက်မျက်နှာနျ Standard လမ်းကြောင်း (IV + အာဖရိကအရှေ့တန်း) သို့မဟုတ် (V ကို 5.8+) ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာတက် AH Firmin နှင့် P. Hicks အားဖြင့် 1944 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည် Batian တက်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးဇွန်လနှင့်အောက်တိုဘာလအကြားတက်ပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းအဆိုပါပွဲကြည့်စင်သို့လက်ဝဲတက်ကိုဖြတ်သန်းရှေ့တော်၌ကျောက် couloir ၌ခုနစ်ကွင်းများအတွက်အက်ကြောင်းနှင့်မီးခိုးခေါင်းတိုင် Batian ၏အရှေ့မြောက်ဘက်တက်တက်။ အကောင်းတစ်ဦး bivouac ထစ်အဆိုပါပွဲကြည့်စင်၏ညာဘက်ခြမ်းကိုတက် Scramble ။ အထက်, လမ်းကြောင်းအနောက်နိုင်ငံတွေ Ridge အပေါ် Shipton ရဲ့ Notch ရန်, Firmin ရဲ့မျှော်စင်, လမ်းကြောင်း၏ crux ထကျပိုအက်ကွဲကြောင်းများနှင့်မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကျော်ဝင်သော, အဲဒီနောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖို့ airy ခေါင်အောက်ပါအတိုင်း။ အဆိုပါနွယ်ဖွားလမ်းကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်။ အတော်များများကတောင်တက်သမားလည်း Nelion ကူးခရီးလှညျ့လကဆင်း။
တောင်ပေါ်မှာကင်ညာနှင့် ပတ်သက်. စာအုပ်များဝယ်ရန်
ကင်မရွန်ဘန်းသည်။ တောင်ပေါ်ကကင်ညာတက်ပြီးမှ Excellent ကလမ်းညွှန်။
တောင်ပေါ်ကကင်ညာအပေါ်အဘယ်သူမျှမပျော်ပွဲစား: တစ်ဦးကရဲ Escape, Felice Benuzzi နေဖြင့်တစ်ဦးကဘေးတောင်တက်။ နှစ်ဦး၏ဂန္ထဝင်စွန့်စားမှုပုံပြင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အီတလီအကျဉ်းသား-of စစ်တောင်ပေါ်မှာကင်ညာကိုတက်တဲ့သူကိုလွတ်ရ၏။
သင်သွားရမတိုင်မီသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲကင်ညာ Lonely Planet ။
အကြီးအ Lonely Planet အချက်အလက်အများကြီး။
Dhaulagiri: ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် 7th အမြင့်ဆုံးတောင်
Humphrey Peak: အရီဇိုးနားအတွက်အမြင့်ဆုံးတောင်
မေပယ် Canyon အမှာ Adventures ကိုတောင်တက်အားကစား
တောင်ပေါ်က Shasta တောင်တက်ခြင်းအချက်အလက်
တက်ပြီးတောင်ပေါ်မှာနေကြာ: Kansas ပြည်နယ်အမြင့်ပွိုင့်
တောင်ပေါ်က Elbert: ကော်လိုရာဒိုအတွက်အမြင့်ဆုံးတောင်
တောင်အမေရိကရှိအမြင့်ဆုံးတောင်: Aconcagua တက်
ပိုက် Peak: ကော်လိုရာဒိုအတွက် 31 အမြင့်ဆုံးတောင်
Kangchenjunga အပေါ်စွန့်စားမှု: အိန္ဒိယခေါင်မိုးမှတက်ခြင်း
စီးတီး Tech မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ကြည့်ရှု, ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် Watch
တစ်ဦးအပူပိုင်းဒေသငါးကိုခပ် - တစ်ကာတွန်းအပူပိုင်းဒေသငါးကိုခပ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Mansfield တက္ကသိုလ် Pennsylvania ပြည်နယ်၏အဆင့်လက်ခံရေး
ဘယ်အချိန်မှာများနှင့်အဘယ်မှာရှိ Elvis Presley ဆီမှာဆိုရင်ရဲ့နောက်ဆုံးဖျော်ဖြေပွဲခဲ့သလား
အဆိုပါ Doppelganger သရဲခြောက်သော
တမန်တော်ပေါလုက - ခရစ်ယာန် Messenger ကို
Linear သို့မဟုတ်သန့်စင်သောပုံ Drawing
သင့်ရဲ့ဟွန်ဒါအင်ဂျင်ပူဖြစ်တဲ့အခါစတင်ခြင်း Trouble ဖူးပါသလား?
ယနေ့ရော့ခ်ဂီတခုနှစ်တွင်ထိပ်တန်း 10 Frontwomen
Epistemology အတွက်သီအိုရီ: ကျွန်ုပ်တို့၏ Sense ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိပါသလား
ပြင်သစ် Speaking တဲ့အခါမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားတော့ပူပန်ကျော်လွှားခြင်း
ဘယ်လိုရေခဲနေသောနှင့်ခက်ထုပ်ပိုးနှင်းအပေါ် Safely နှင်းလျှောစီးဖို့
Porfirio Diaz ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ